ASTAANTA BORIC EE DHIRTA BEERTA IYO BEERTA KHUDRADDA: SIDA LOO ISTICMAALO MAANDORIYAHA DALAGGA KALA DUWAN - BEERTA
Boric acid waa lagama maarmaan u ah dhammaan miro, khudradda, berrinka iyo dalagyada miraha. Ma aha oo kaliya ka ilaalinta microbes pathogenic, laakiin sidoo kale kordhisaa wax-soosaarkooda, ku kordhisaa kororka content sonkorta. Natiijadu waa mid macaan, tayo sare leh. Intaa waxaa dheer, dhirta la daweeyey ma yihiin kuwa la yiraahdo kallana, miraha midkoodna ma jabin qoyaanka xad-dhaaf ah. Boron ma ahan wax beddel ah bacriminta, laakiin waa qayb muhiim ah ee flora. Sidee buu acid borotiinku u saameeyaa dhirta beerta iyo beerta iyo waxa loo yareeyey si loo isticmaalo - waxan ka bartay tan beeralayda qibrada leh.
Ma taqaanaa? In ka badan 300 sano ka hor, dabeecada Faransiiska iyo dhakhtarka Wilhelm Gomberg wuxuu helay boric acid lacag la'aan ah kululaynta kuleylka borax iyo sulfuric acid. Waqti ka dib, waxaa la soo saaray daawo loo yaqaan "salsedavitum".
Boric acid: sharaxaad
Deegaanka dabiiciga ah, boric acid aan laga helin waxaa laga helaa meelaha qaarkood ee volcanka ee Tuscany, Islands of Loparian iyo Nevada. Waxaa sidoo kale laga heli karaa macdano badan, sida borax, boracitanka, colemanite. Intaa waxaa dheer, walxadan waxa la helay xitaa biyaha badda iyo dhirta oo dhan.
Boric (qoryaha, qummanaanta, borate) acid waa daciif ahaan aantariga ah. Kuwani waa crystals cad, kuwaas oo si aan fiicnayn biyo lagu qaboojiyo. Marka kululaynta, waxay luminayaan qoyaan, samaynta metaboric marka hore, ka dibna tetraboric acid iyo, ugu dambeyntii, oxic oxide. Haddii xeryahaan kor lagu soo qorey ay biyaha ku jiraan, boric acid waxaa mar kale laga sameeyaa iyaga. Xalka boric acid waxaa loo isticmaalaa daawada sida antiseptic, beerista, beeraha, iyo xitaa reactors nukliyeerka.
Waa maxay boric acid faa'iido leh dhirta
Wixii miro iyo ornamental, dalagga ubax, boric acid waa bacrimin ugu muhiimsan inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya. Marka la samaynayo afkoda, qaybta waxay ka caawisaa xididada oksijiinta, waxay kordhisaa helitaanka kalsiyumka oo dhan dhejisyada dhirta, waxay kordhisaa xaddiga chlorophyll ee biomasska cagaaran, iyo hagaajinta hababka dheef-shiid kiimikaadka.
Marka lagu xereeyo miraha leh asiidh, biqilka biiyaha ayaa la kiciyaa. In marxaladaha hore ee dhirta warshad, rooting of geedo waa la hagaajiyay, boqolkiiba of ugxan loo sameeyey kor u kacay, synthesis of walxaha nitrogenous waa caadi. Waqtiga quudinta oo leh boric acid kiciso koritaanka degdeg ah iyo xoojinta dhaqanka. Agrochemists waxay yiraahdaan: haddii ciidda ay ku filan tahay cufan, midho dhalinta, dhalidda miraha iyo iska-caabbinta dhirta xaaladaha khatarta ah, oo ay ku jiraan cayayaanka, infekshannada, kordhaya.
Ma taqaanaa? Boric acid waxay wax ku ool u leedahay xakamaynta cayayaanka kala duwan, oo ay ku jiraan baranbarada iyo dhirta.
Isticmaalka boric acid beerta iyo beerta: tilmaamaha isticmaalka
Boric acid in horticulture waxaa loo isticmaalaa si loo dedejiyo koritaanka iyo horumarinta dalagyada khudradda iyo biqilka fiicnaanta ee miro. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagu talinayaa in la dhigo abuurka ka hor beerashada boorso faashad ah oo ku qoyso xal of boric acid at heerka of 0.2 g halkii 1 litir oo biyo kulul labada maalmood. Waxaad diyaarin kartaa ash isku dar ah 5 g oo ah baking soda, 1 g oo ah kaneecada kalluunka, 0.2 g of boric acid iyo 1 l oo biyo diirran.
Labo jeer muddada gaysashada, bannaanka u dhaqmaan dhaqanka leh daawooyinka boron-ka kooban. Boric acid sida bacriminta waxaa loo isticmaali karaa saddex jeer beerta. Daaweynta dambe waxaa loo sameeyaa si loo kordhiyo sonkorta ee midhaha, taas oo hagaajin doonta dhadhanka. Xalka waxaa loo diyaariyaa cabirkiisu yahay 10 g oo ah per 10 l oo biyo ah. Iyada oo ku xiran diirada dhaqanka ayaa laga yaabaa inay isbedbedesho. Nidaamka waxaa lagula talinayaa inuu sameeyo fiidkii si looga fogaado gubashada caleemaha.
Dajinta dhoobada gaasta ah waa mid aad u dhif ah, maaddaama xalka uu si weyn u dhaawici karo fiilooyinka. Asal ahaan, markii la waraabiyo, kareemada ayaa lagu daraa si ay midhaha u helaan si ay u helaan tones oo qani ah. Samee nidaamkan aan ka badnayn 1 jeer 3 sano. Beeralayda khibrad leh waxay kugula talinayaan in ay ciidda si fiican u qoyaan ka hor intaadan samaynin microfertil-haas oo kale.
Sida loo isticmaalo aashito tufaaxa iyo pear
Boron ma aha mid u eg caleenta caleenta cayayaanka. Sidaa darteed, in muddada koritaanka firfircoon ee dalagyada miraha quudinta foliar waa mid aad u muhiim ah. On tufaax iyo isteroberi, la'aanta walaxda this muujinaysaa horumarinta miro miro. Xaaladaha daran ee la dayacay, sare ee dhirta ayaa billaabanaya inay si dhaqso ah u soo degaan. Caleemaha ayaa cidhiidhi ah, si aan caado lahayn, lafdhabarta. Xidhanaha dusha sare waxay noqdaan kuwo qaro weyn iyo cadcad. Dhamaadka darfaha, caleemaha yaryar waxay sameeyaan nooca rosette, taas oo aan caadi ahayn ee horumarinta caadiga ah ee tufaaxa iyo geedaha pear. Haddii aan waxba laga qaban marxaladaha ugu horeeya, cudurku waa uu sii soconayaa: ubaxyada ayaa u engegi doona, ugxan-soo-baxyada ka dhalaneysa waxay u qaadan doontaa miraha aan kala go 'lahayn. Jidhka tufaaxa iyo isbarisooyinku waxay ku daboolan yihiin balastar ballaaran, oo leh dhoobo boodbood leh oo soo noqnoqda waqti yar.
Waa muhiim! Boric acid waxaa lagu dhalaaliyaa biyo kulul. Si aad u hesho xal shaqo, marka hore kareemada waxaa lagu shubaa qadar yar oo dareeraha kulul, ka dibna lagu qasi karaa qabow si aad u hesho mugga loo baahan yahay.
Boric acid waxaa lagula talinayaa in dhirta caaflmaadka bukaanka ah ee caafimaadka leh 2-3 jeer. Tijaabinta taajaha waxaa lagula talinayaa ujeedooyinka qarsoodiga ah ee bilawga ubaxyada, kadibna soo noqnoqon muddo hal toddobaad ah. Xalka daaweynta waxaa lagu diyaariyaa heerarka 20 g ee budada ah 10 litir oo biyo ah. Haddii quudinta foliar ee noocaas ah loo isticmaalo geedaha midhaha leh ee waxyeelloobay, dayrta ugxan-yarta ayaa si muuqata u yaraada. Laakiin waxa fiican in aan loo oggolaan in ay sii xumaato midhaha oo ay u fuliyaan wax soo saarkooda horayba.
Isticmaalka boric acid for strawberries
Si aad u hesho miro berry macaan ee strawberry beerta iyo strawberry duurjoogta ah waxaa lagu talinayaa in ay fuliyaan nidaam nidaamsan ee dhirta. Haddii kale, yaraanta boronku waxay saamayn doontaa necroos iyo cirridka. Maaraynta waa lagama maarmaan ka hor furitaanka burooyinkeeda, iyo sidoo kale inta lagu jiro muddada fruiting, marka berry ay gaarto heerarka caadiga ah. Beeralayda qaarkood waxay ku taliyaan guga hore si ay ugu daadiyaan boric acid sida waafaqsan tilmaamaha isticmaalka dhulka ee dalka. Waxaad ku dari kartaa dhowr dhibcood oo ah kiniinka potassium si xal. 10 litir oo dareere ah ayaa ku filan qiyaastii 40-50 dhirta. Later, marka peduncles foomka, waxaa lagugula talinayaa in lagu buufiyo duurka leh isku dar ah 5 g budada boron iyo 10 litir oo biyo ah. Iyo inta lagu jiro Bisaylkiisa ee berry, waxaa lagu talinayaa in lagu daro bacrimin dheeraad ah ka boric acid, ash manganese iyo 1 koob oo biyo ah ee saamiga 2: 2: 1.
Asaasiga Boric for yaanyada
In yaanyada, celceliska baahida loo qabo boron. Dhibaatadoodu waxay muujinaysaa madow iyo qallafsan oo ka imanaya afkoda, jilicsanaanta caleemaha yar yar iyo bar madow oo midhaha leh. Si looga hortago fiilooyinka yaanyada laga bilaabo dhimashada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo miraha leh crystals kala diri ka hor intaan la beeri. Asaaska Boric for yaanyada waa suurad wacan muddada transplanting. Waxaad bacrimin kartaa ciidda leh acid ama boron-ku jira daawooyinka. Si aan loo gubin nidaamka xididka, si taxadar leh ku shub ceelasha diyaarsan ee biyo cad. Nidaamkan noocan oo kale ah ayaa muhiimad gaar ah ku leh dhulalka loo xaaqay markii ugu horeysay.
Mashiinka Boric acid ee yaanyada ayaa muhiim ah marka caws ubaxa horay u sameeyay, iyo burooyinkuna weli ma la furay. Xalka waxaa loo diyaariyaa sida waafaqsan nidaamka caadiga ah: 10 g halkii 10 l
Waa muhiim! Dhirta Apple, isteroberi, Brussels iyo tayo-saarid, jeexan iyo xididdo ayaa leh baahida ugu weyn ee boron. Digirta, baradhada, digirta iyo strawberries waxay ku yar yihiin arrintan. Laakiin xaalad kasta, yaraanta ay si weyn u saameeyeen xaaladda dhirta.
Sida loo isticmaalo boric acid si canab
Haddii canabku maqan yahay boron, xitaa noocyo caan ah ayaa keenaya burush yar. Calaamad muujinaysa maqnaanshaha waxay noqon doontaa dhibco chloride on caleemaha. Khabiiradu waxay soo wacaan "geed". Daaweynta iyo prophylaxis waxaa lagula talinayaa boric acid, taasoo daaweyntu ay ku filan tahay marxaladaha hore ee cudurka.
Mashiinka ayaa si fiican loo abaabulaa inta lagu jiro abuurista inflorescences. Xaaladdan oo kale, iyaga oo aan u qaxaya, taas oo kordhin doona dhalidda. Marka diyaarinta xalka (5 g oo budada ah halkii 10 litir oo biyo ah), bannaanka khibrad leh ku dar 5 g of zinc. Soo celinta wax soo celinta waa suurad wacan, sida dalagyo kale oo miraha ah, inta lagu jiro Bisaylkiisa miro.
Astaanta Boric ee qajaarka
Cunto boric acid for qajaarka iyo sidoo kale for yaanyada, waa mid muhiim ah, sababtoo ah waxay ku kordhinaysaa ubax badan iyo formation of ugxan. Habka ugu wax ku oolka ah wuxuu ahaa foliar codsiga nafaqeeyayaalka yar yar ka hor inta uusan furin burooyinkeeda. Xalka 5 g oo ah acid iyo 10 litir oo biyo ah, bannaanka qaar ayaa lagula talinayaa inay ku daraan sonkor yar ama malab. Tani waxaa la sameeyaa si loo soo jiito riddada cayayaanka. Isku-buufinta dhirta qajaarka leh boric acid waa la sameeyaa marka ugxansiisku la sameeyo. Bedelkii sonkorta, dhowr dhibcood oo kaneecada kalluunka ayaa lagu daraa xalka dhaqanka si looga hortago dhirbashka budada ee sprouts.
Isticmaalka boric acid for xididdo
Inkasta oo beetroot loo tixgeliyo in ay ku tiirsan tahay content boron, laakiin ay yaraanta si degdeg ah u sameeyaa dalagga oo dhan xidid aan la isticmaali karin. Marka la eego horumarinta fomosis ee ay sababtay fangaska, xajka dabocase wuxuu bilaabmaa inuu kareemo, caleemaha waxaa lagu daboolaa dhibco caleemo qafiif ah. Xayawaanka noocan oo kale ah looma baabi'in karo, waxay leedahay ur aan fiicnayn, dhadhan, walxo sun ah ayaa lagu sameeyaa fiilooyinka madow.
Si loo badbaadiyo dalagga iyo ka hortagga muuqaalka fangaska, talaabada ugu horeysa waa in la hirgeliyo abuurka ka hor beerashada. Oo marka geedo bixiyaan 4-5 caleemo, waa ku filan in ay qaadaan hal buufin leh xal xal.
Waa muhiim! Bini'aadanku, boric acid inta lagu jiro xiriirka dibadda si buuxda looma dhibo: ma keeno fal celin xasaasiyadeed iyo xajin maqaarka. Marka la cuno, boronku si tartiib ah ayuu uga baxaa jirka. 20 g oo ah walax - qaadasho dose ah. Qeybo badan oo boron waxay u badan tahay in ay waxyeeleeyaan dhirta intii ay ka caawin lahayd horumarinta. Caleemaha caleenta, caleenta ay ku markhaati kacaan inta badan. Haddii dhaqamada noocan oo kale ay ku quudiyaan lo'daha, ugu dhakhsaha badan wuxuu yeelan doonaa cudurrada daba-dheer ee habka caloosha iyo mindhicirka.
Boric acid iyo baradhada
Iyadoo lumay baradho boroneysi isdifaac. Boorashka ayaa si tartiib ah u kobcaya, caleentuna waxay noqotaa mid jaale ah, afkuna wuu jabaa. Agrochemists waxay soo jeedinayaan nidaam: ku tiirsanaanta digirta ku jirta boronka ayaa go'aaminaya qaabeynta substrate-ka. Baahida loo qabo kordhinta soddon-podzolic, kaynta, marshyaha, dhulalka acidic. Iyo sidoo kale meelaha leh kororka kordhiyey carbonates, potassium, nitrogen, lime. Bacriminta Phosphorus, on lid ku ah, yaree baahida loo qabo bacriminta leh boron-ka kooban Bacriminta.
Tilmaamaha ugu horreeya ee qolofta, waxaa muhiim ah in sariirta lagu daaweeyo xalka boric acid at heerka 6 g 10l oo biyo ah. Isku dar ah diyaarinta waa ku filan 10 mitir oo laba jibbaaran. m. Iyadoo ujeedada ka hortag ah ee lagu buufinayo wax lagu beero ama caleemaha ugu horreeya ee baradho ayaa ku caawin doona.
Calaamadaha la'aanta boron ee dhirta beerta iyo beerta
Boric acid si loo isticmaalo beerta laguma beddeli karo. Maqnaanshaha walxadan waxaa lagu muujiyey calaamado badan oo aan fiicnayn:
caleenta sare ee geedka waxay noqotaa cirro iyo huruud;
caleemaha cusub waxay u koraan qaabdhismeedka, jaban, si deg deg ah u baxaan;
oo kaliya burooyinkeeda dambe ayaa horumaraya, xajmiga oo ka maqan;
Necrosis waa la ogaan karaa afkoda iyo miraha;
sare ee caleemaha u dhinto;
duufaannada waa kuwo liita;
ugxan si xun u qubey;
dalagyada xididka ah waxay daboolaan qolofta fangas;
tayo fiican ayaa saameeyeen kallana midab leh.
Diyaarinta Boric Acid
Dukaamada khaaska ah waxaad ka heli kartaa bacriminta kala duwan ee Bacriminta kala duwan, oo ay ku jiraan boron. Si aad u daadisid boric acid on yaanyada, qajaarka, baradhada iyo dalagyada kale ee khudradda, Mag-Bor ayaa ku taliyey in ay si fiican u dhajiso (baakad 20 g ah oo lagu qasi karo 10 litir oo biyo ah, xalka waxaa lagu wada baabbi'iyey 3 sq.
Wixii daaweynta ee ubaxyo ubaxyo dhirta indoor leh "Pokon" (dareeraha boron ee dhalada cagaaran). Waxaa suurtagal ah in la diyaariyo xalka shaqeynaya baakad ku jirta 10 bam oo ah bacalka boric acid ama baconium boomeriyam, kaas oo ka kooban 13% boric acid iyo 14% magnesium oxide. Farmashiyayaasha beeraha ayaa ku talinaya isticmaalka boric superfosphate borax iyo borax (sodyam boric acid) oo ah quudinta ugu weyn.
Hadda oo aad ka ogtahay faa'iidooyinka boric acid, markii aan ogaanay waxa loo baahan yahay beerta iyo beerta, waxaan rajeyneynaa in dhirtaadu ay ku raaxaysan doonaan dalagyo badan.